Usamirire iOS 13 kuti uende kune rima | IPhone nhau
Usamirira iOS 13 kuti uende kudivi rerima
Toni Cortés | | IPhone maapplication, iOS 13, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Usamirira iOS 13 kuti uende kudivi rerima. Apple yakawedzera yakasviba modhi mune yayo nyowani iOS 13. Kukwiridzira kwekushandisa rima maitiro kunoenderana nezvinhu zviviri: Sevha bhatiri neOLED kuratidza, uye iri nani kuva nemeso kumeso.
Tichakamirira kusvika kweIOS 13 munaGunyana, ini ndinokuratidza mamwe maapplication anogona kutotora yavo yakasviba interface, uye maitiro ekuishandisa mune yega yega. Saka ikozvino unogona kuenda kudivi rerima ...
2 Inonakidza 2
Kana iwe uine Apple Watch unenge watoona kare kuti yako application pa iPhone yatove murima modhi. Haufanire kuita chero chinhu pano.
Ichi chishandiso chakakurumbira chinobatanidza iyo iCloud karenda uye zviyeuchidzo mune imwe, yakasununguka kwazvo kushandisa. Chikamu chayo chine maitiro ayo erima. Pachikona chepamusha, bata iyo giya icon uye kudzima "yakajeka chitarisiko". Haisi iyo yakazara rima interface, ingori chikamu chekufambidzana chikamu.
Ini ndinoda Twitter yakasviba modhi. Enda kumasettings, wozoenda kuScreen uye kurira, uye shandisa mamiriro erima. Iwe zvakare une sarudzo yemamiriro erima chete husiku, uye wozodzokera kumwenje modhi mangwanani.
Kana iwe ukashandisa muverengi wenhau uyu, ziva kuti zvinogona zvakare kukuendesa kudivi rerima nekungobata chete matepi maviri. Enda kumenu mukona yezasi kuruboshwe, uye wobva wasarudza nzira yemanheru. Hazvigone kuve nyore.
Facebook yagara kubvira yatanga nzira yayo yerima yeMessenger. Iye zvino unogona kuwana bhatani mushure mekubaya papato rako avatar. Pazasi peiyo bhatani rinotooneka.
Kuverenga bhuku murima uine yakajeka kumashure kunonetesa kutarisa. Apple inoziva izvi uye inokupa iwe sarudzo yekuchinja iyo yekumashure ruvara, kunyangwe kune nhema. Paunenge uchiverenga bhuku tinya iyo "Aa" icon, uye sarudza iyo yekumashure color yaunoda zvakanyanya. Iwe unokwanisa kugonesa mamiriro emanheru otomatiki.
Uyu muenzaniso wekuti maitiro ekugona kusarudza dema interface akaiswa mumashandisirwo akasiyana. NaIos 13, iyo yakasviba rima modhi ichave yatove inogoneka muhurongwa hwekushandisa, uye mune zvese zvinoshandiswa zvinoratidzwa, pasina kumisikidza imwe neimwe, uye kumanikidza iyo nhema nhema kunyangwe kana application isina sarudzo iyi.
Pasina mubvunzo nhau huru kuna Darth Vader nevateveri vake ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Usamirira iOS 13 kuti uende kudivi rerima
IKEA inogadzirira kuwedzera kudyara mumidziyo ine HomeKit
Siri anorova Alexa muhungwaru asi haarove Google Mubatsiri